Wasiiradda Cusub ee Ra'iisal Wasaare Kheyre oo maanta hortagaya Baarlamaanka dalka | SAHAN ONLINE
Wasiiradda Cusub ee Ra’iisal Wasaare Kheyre oo maanta hortagaya Baarlamaanka dalka
MUQDISHO – Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in uu maanta horgeeyo gollaha baarlamaanka gollihiisa wasiirada cusub si ay codka kalsoonida u siiyaan.
Gollaha wasiiradda cusub ayaa ka kooban 67 xubnood,waxaase dhaliilay oo saluugay xildhibaano ka badan 100 kuwaasoo dhaliilay in gollihu aysan waafaqsaneyn qaabka habqeybsiga ee horay loogu dhaqmi jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa todobaadkan ka dalbaday Ra’iisal Wasaaraha in uu saxo khaladka ka hor inta aanu wakhtiga ka dhamaan si looga baaqsado khilaaf iyo dib u dhac ku yimaada kalsooni siinta gollaha Wasiirada.
Ra’iisal Wasaare Kheyre ayaa lagu wadaa in uu khudbad u jeediyo xubnaha baarlamaanka soona bandhigo ajendaha xukuumadiisa kuna qanciyo in ay codka kalsoonida siiyaan gollaha xukuumadiisa oo ay meel-mariyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa marar badan ka codsaday baarlamaanka in ay ansixiyaan xukuumadda ,waxaase jiray baaqyo kale oo lagaga codsanayey baarlamaanka iney ansixiyaan Xukuumadda.